खोजी इन्जिन अनुकूलनको लागि साइट तयार गर्ने?
स्थितिलाई कल्पना गर्नुहोस् तपाईंले आफ्नो सपनालाई वास्तविकतामा अनुवाद गरेको र आफ्नो आफ्नै वेबसाइट सुरू गर्नुभएको छ. अब, यो तपाईंको अनलाइन उपस्थिति सुधार्नको लागि समय हो र तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूलाई तपाईंको नयाँ डोमेनमा आकर्षित गर्नुहोस्. निस्सन्देह, तपाईंको वेबसाइट पदोन्नति एक दिनमा गर्न सकिँदैन किनभने खोजी क्रलरका लागि केहि समय लाग्छ तपाईको डोमेन अनुक्रमणिका. यद्यपि, तपाईले यो प्रक्रियालाई खोज इन्जिन अनुकूलन कार्य गर्दै प्रभाव पार्छ. एसईओ एक समय-उपभोग प्रक्रिया हो, तपाईं तुरुन्त परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुने छैन. यद्यपि, तपाइँले तपाइँको वेब स्रोतको शुरुवात गर्नुहुने पहिलो अप्टिमाइजेसन सुधारहरू तपाईंको अनलाइन व्यापार क्षमतामा महत्त्वपूर्ण असर हुन सक्छ. उदाहरणका लागि, तपाईंको सम्भावित ग्राहकले यी खोज सर्तहरू द्वारा तपाईंको साइट पत्ता लगाउँदा सही खोजशब्द चयनले तपाइँको भविष्यमा अनलाइन उपस्थितिमा ठूलो असर पार्दछ. भविष्यमा समय बचत गर्न र कुनै पनि वेबसाइट त्रुटिहरू ठीक गर्न आवश्यक कम गर्न तपाईंले एकै पटक राम्रो अनुकूलन अभियान निर्माण गर्न आवश्यक छ.
यस गाइडमा, तपाइँसँग ती साइट मालिकहरूको लागि केहि सल्लाहहरू छन् जसले आफ्नो वेब स्रोतहरू सुरू गरे।. निम्न सुझावहरूले तपाईंलाई राम्रो खोजी इन्जिन अनुकूलन रणनीति डिजाइन गर्न मद्दत गर्नेछ जब तपाइँ नयाँ वेबसाइट सुरू गर्न निश्चित गर्न यो धेरै शुरुवातबाट डिजाइन गरिएको खोज इन्जिनबाट गुणस्तर ट्राफिकलाई आकर्षित गर्न निश्चित छ।.
मेरो हालैको शुरुवात वेबसाइट कसरी एसईओ गर्न सक्छु?
तपाईंलाई आफ्नो वेबसाइट को प्रासंगिक खोजशब्दहरु लाई यसको रैंकिंग मा सुधार गर्न को लागी संरचना को आवश्यकता छ।. तपाईंको साइटको प्रत्येक पृष्ठले प्रासंगिक, उच्च-भोल्युम कीवर्डहरूको आफ्नै सेटलाई लक्षित गर्न सक्दछ जुन खोजी बटहरू तपाईंको सामग्रीको पार्सिलोना गर्न मद्दत गर्दछ. तपाईंले आफ्नो वेबसाइट संरचना को विभिन्न विभिन्न श्रेणियों मा तोडने को आवश्यकता छ. प्रत्येक प्रकार को विभिन्न खोज शब्द को उद्देश्य हुनु पर्छ Google TOP मा विभिन्न सम्बन्धित प्रश्नहरु को लागी तपाईंको मौका उठाउन. वेबसाइट संरचनामा धेरै फाइदाहरू छन्. सबै भन्दा पहिले, यो एक स्पष्ट विषयवस्तु सिर्जना गर्दछ र प्रत्येक वेबसाइट पेजको लागि खोज शब्द लक्षित गर्छ, बरु मुख्य पृष्ठमा धेरै कुञ्जी शब्दहरू लक्षित गर्नुको सट्टा. यो प्रकारको लक्ष्यीकरण वेबसाइट अधिकतम सम्बन्धमा प्रदान गर्दछ.
प्रयोगकर्ता-अनुकूल अनुकूलित सामग्री
हाल, सम्बन्धित र गुणस्तरको सामग्री एक महत्त्वपूर्ण Google रैंकिंग कारकको रूपमा कार्य गर्दछ।. अनुकूलित सामग्री पीढी मा साइट अनुकूलन को भाग हो. यसको मतलब छ कि वेबसाईट मालिकहरूले एसईओ को यो भाग पुरा तरिकाले नियन्त्रण गर्न सक्छन्. त्यसोभए, कुनै पनि प्रभावकारी एसईओ प्रयासहरू सुरु गर्नु अघि, तपाईंको सामग्री राम्रो तरिकाले संरचित र तपाईंको उद्योगसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस्. यसबाहेक, तपाईंले आफ्नो सामग्रीमा सान्दर्भिक कुञ्जीहरू समावेश गर्न आवश्यक छ कि यो बिन्दु खोजी गर्न दृश्यात्मक बनाउन. म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छ कि सबैभन्दा उच्च-भोल्युम र ट्राफिक-खोजशब्दहरू शीर्षकहरूमा र अनुच्छेदको सुरुवातमा राख्नुस्. यसबाहेक, तपाईं वर्णन र ALT हरु प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. हालैको अनुसन्धानको अनुसार, Google ले ती पृष्ठहरूमा उच्च स्थान पाउँछ जुन 2,000+ शब्दहरू समावेश गर्दछ र त्यसपछि छोटो र हल्का सामग्रीको पृष्ठहरू हुन्छन् किनभने तिनीहरू सामान्यतया औसत प्रयोगकर्ताहरूका लागि कुनै पनि उपयोगी छैनन्। 'जानकारी. यसकारण म सख्त संरचनाको साथ 2-3 पृष्ठ लामो लेख लेख्न सल्लाह दिन्छु, उदाहरणको लागि, चरण-दर-निर्देश गाइड, ट्यूटोरियल वा सुझावहरू. अनुसन्धानले पनि देखाउँछ, कि लामो र मध्यम आकारको सामग्री छोटो पाठ भन्दा बढी लिङ्कहरू सम्भव छन्. अन्ततः, यसले तपाईंलाई प्रत्येक पृष्ठको इन्बाउन्ड लिङ्कको ठूलो संख्या निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ Source .